Cysboard safidy mahaliana an'ny conky | Avy amin'ny Linux
Eto amin'ny bilaogy noresahintsika matetika Conky, ilay fitaovana ahafahantsika manara-maso ny rafitray ary manampy zavatra hita maso izay manome fikitika manokana ny birao anay. Amin'ity indray mandeha ity dia te hiresaka aminao izahay Cysboard izay tsara tarehy fanoloana an'i Conky, miaraka amin'ny toetra mampiavaka tena mahaliana.
1 Inona no atao hoe Cysboard?
2 Ahoana ny fametrahana sy fampiasana Cysboard?
Inona no atao hoe Cysboard?
Cysboard Is a fanaraha-maso ny rafitra maivana mitovy amin'ny conky que mampiasa html sy css amin'ny fanaingoana ireo lohahevitrao. Izy io dia manana fampahalalana marobe momba ny rafitray, manomboka amin'ny anaran'ny CPU, amin'ny alàlan'ny statistikan'ny fahatsiarovana ram, hatramin'ny ora ilaina hanombohana ny rafitra fiasanay.
Cysboard loharano misokatra, novolavolaina tamin'ny C ++, html ary css avy amin'i Michael OseiIzy io dia mandany loharano kely dia kely ary afaka manamboatra lohahevitra ho an'ny monitor mora foana ianao noho izy ireo natao tamin'ny html sy css.
Ahoana ny fametrahana sy fampiasana Cysboard?
Ny fametrahana sy ny fampiasana Cysboard manaraka dia tsotra, ao amin'ny app github Misy latabatra misy ireo mpanondro izay maneho ny mombamomba ny rafitra, ary ohatra kely dia aseho miaraka amin'ny rafitra html fototra hanaovana lohahevitra.
Raha hametraka ny fampiharana dia tsy maintsy manaraka ireto dingana manaraka ireto izahay:
Tsy maintsy nametraka ireo fiankinan-doha ilaina isika izay cmake> = 3.1 sy gcc> = 5.4.
Clone ny tahiry ofisialin'ny fitaovana
Mandehana any amin'ny lahatahiry lehibe ary manangona
$ cd Cysboard / $ mkdir manangana $ cmake. $ make
Mba hamoronana ny lohahevitray manokana momba ny cysboard dia tsy maintsy manaraka ny dingana nasehon'ilay namorona azy isika:
Mamorona fisie ho an'ny lohahevitra antsoina hoe main.html ao amin'ny ~ / .config / cysboard /.
Ampio ny kaody html miaraka amin'ireo mpampahafantatra voatanisa ao amin'ny latabatra hita ao amin'ny github anao izay manome ny mombamomba ny rafitra.
Raha tsy te-hamorona lohahevitra iray isika, dia alefa miaraka amina lohahevitra sasantsasany izay mandeha tsy misy hatrizay ilay fitaovana.
Raha tsy misy fisalasalana, ity dia fomba iray mahaliana kokoa ho an'ny conky, izay miaraka amin'ny fahalalana fototra momba ny html sy css dia mety hahatratra ny famaranana tena mahafinaritra ary manome ny fampahalalana ilaina rehetra hanaraha-maso ny rafitra fiasanay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » GNU / Linux » Cysboard safidy mahaliana an'ny conky
Wow !!! Tena mahaliana. Tsy nahalala an'ity programa ity aho. Misaotra betsaka amin'ny fanazavana 😉
Hyperion dia hoy izy:
Tsy misy intsony i Conky, ara-potoana sy endriny nisehoana io.
Valiny ho an'i Hyperion
Tsy misy intsony i Conky ...?
Ary amin'izao dia hitako fa tena ambony i Conky ...
Armando Ibarra dia hoy izy:
Miankina amin'izay tianao ampiasaina io ohatra xmobar, lemonbar na manambatra conky amin'ny dzen2 sns.
Mampiasa fitaovana tsirairay aho amin'ny fanaraha-maso isan-karazany na ohatra ny bara xmobar, noho izany dia mampiasa loharanom-pahalalana kely kokoa noho ny hoe ataonao amin'ny iray monja ny zava-drehetra.
Valiny ho an'i Armando Ibarra
Ao amin'ny trano fitehirizam-bokin'ny Ubuntu, Lubuntu, Linux Mint sns, sns dia misy grekllm izay feno kokoa sy tsara kokoa noho izany.
Diso aho ny anarana hoe "Gkrellm"